Hawaasni musliimaa nageenya biyyaatiif kadhachuun moowulida kabajuu akka qabu ibsame
Hawaasni musliimaa nageenya biyyaatiif kadhachuun moowulida kabajuu akka qabu ibsame Featured
Hordoftootni amantii Islaamaa guyyaan dhaloota Ergamaa Mohaammad (moowulida) nageenya biyyattiif kadhannaa gochuutiin kabajuu akka qaban Manni Maree Waliigalaa Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa Oromiyaas hawaasni muslimaa nageenya biyyattiif akka kadhatu gaafateera. Guyyaan ayyaana moowulida bara 2010 si’a kuma tokkoofi 492faf Kaleessa kabajamee ooleera.
Pirezdaantiin mana marichaa Hajii Mohaammad Amiin Jamaal guyyaa dhaloota nabii Mohaammad bara kanaa sababeeffachuun Roobii darbe waajjirasaaniitti gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti, ayyanni moowulidaa akka addunyaatti qophiilee garagaraan kan kabajamu yoo ta’u, Itoophiyaa keessattis durii kaasee dhalachuu nabii Mohaammad sababeeffachuun hordoftoota amantii Islaama maraan kabajamaa har’a gaheera. Guyyaan kun ammoo karaa ergamaa Rabbii kan ta’e Mohaammadiitiin addunyaa dukanooftuu gara ifaatti waan dhufteef yaadachuuf jecha gammachuutiin kabajamaa bara kana gahuusaa ibsaniiru.
Faayidaa guyyaa ayyaana kanaa kabajuun qabus hedduu ta’uu dubbatanii, ergamichi ifa Rabbii ta’uusaa yaadachuuf, barsiisa isaanii isa gaarii ta’e sana hordoftoota amantichaa hubachiisuufi namoota harka qalleeyyii ta’an gargaaruuf, aadaafi seenaa islaamummaa cimsuun dhalootaaf dabarsuun isaan ijoodha jedhaniiru. Keessumaa ammoo wayita ammaa kana nageenyi biyyattii sadarkaa yaaddessaarra waan jiruuf hawaasni musliimaa marti ummata maraaf kadhannaa gochuutiin moowulida kabajuun isaanirraa eegamaa jedhaniiru.
Ergamaan Mohaammad dhala namaa hundaaf fakkeenya gaarii ta’uun Rabbiin kan filataman yoo ta’an, namni martuu waliiwaliisaaniif akka wal jaalatan, ormootaaf waan gaarii akka godhaniifi barsiisasaanii gaarii sana akka namoota hubachiisaniif hordoftootni musliimaa tattaaffii gochuu akka qabanis yaadachiisaniiru. Ayyaana moowulidaa wayita kabajanis kanneen rakkatan gargaaruun, warra daaran uwwisuufi dhukkubsattoota gaafachuutiin ta’uu qabas jedhaniiru.
Hordoftootni amantichaas ayyaana moowulida bara kanaa wayita kabajan nageenyi biyyattii akka dhugoomuuf cimsanii Rabbiin kadhachuu akka qaban hubachiisaniiru.
Pirezdaantiin Mana Maree Dhimmoota Islaamummaa Oromiyaas ergaa baga geessanii kan dabarsan yoo ta'u, hordooftonni amanatii Islaamaa naannichaafi Itoophiyaa barsiisa ergamichaa hojiitti hiikuutiin moowulida kabajuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Kana waliinis, ayyaanni moowulidaa kabajamuu kan qabu waljibbuurra waljaalachuun, tokkummaa uumuun, cubbuu duraan tureef araara gaafachuun ta'uu akka qabu dhaamaniiru.
Hawaasni muslimaa hundis nageenyi biyyatti akka kabajamuufi bakkatti deebi'uuf duwaayii gochuun kabajuu akka qaban gaafataniiru.
Torban kana/This_Week 43217
Guyyaa mara/All_Days 1467997